तरकारी नलगाए पाहुना 'प्रतिबन्ध’- कर्णाली - कान्तिपुर समाचार
तरकारी नलगाए पाहुना 'प्रतिबन्ध’
छत्रेश्वरी गाउँपालिका २ ले करेसाबारीमा अर्गानिक तरकारी नलगाएको घरमा पाहुना जान र छोरीबेटी दिन नपाइने नियम लगाएको छ
श्रावण २६, २०७६ विप्लव महर्जन
सल्यान — घरमा करेसाबारी छ कि छैन ? छ भने तरकारी लगाइएको छ कि छैन ? छैन भने ख्याल गर्नुहोस् है घरमा न पाहुना आउनेछन्, न त दुलही नै भित्रिने छिन् ।
सुन्दा अचम्म लाग्ने यो अवस्था छत्रेश्वरी गाउँपालिका(२ को हो । वडाले करेसाबारीमा तरकारी नलगाएका घरमा पाहुना नजान र छोरीबेटी नदिन उर्दी गरेको छ । वडाले ‘एक घर एक करेसाबारी’ कार्यक्रमअन्तर्गत विषादीयुक्त तरकारीलाई विस्थापित गर्न र वडावासीलाई तरकारीमा आत्मनिर्भर बनाउन यस्तो गरेको हो ।
‘आफ्नै करेसाबारीमा अर्गानिक तरकारी लगाउन दबाब दिने उद्देश्यले हामीले यस्तो निर्णय गरेका हौं,’ वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर खडकाले भने, ‘यसले वडावासीको स्वास्थ्यमा राम्रो प्रभाव पार्ने हामीले सोचेका छौं ।’ गत वर्षदेखि सुरु भएको यो कार्यक्रमका कारण वडाका ९० प्रतिशत घरमा करेसाबारी बनाइएको उनले बताए ।
छत्रेश्वरी गाउँपालिका(२ मा दमाचौर, डौरेडारा, डिग्रेखोला, साउनेपानी, अत्तरकाँडा, दहखोला र गुराँसे गाउँ पर्छन् । यी गाउँमा करिब ७ सय घरधुरी छन् । गाउँमा उत्पादन हुने तरकारी स्थानीयले बिक्रीको लागि बजारमा समेत लिने गरेका वडाध्यक्ष खडकाले बताए । ‘करेसाबारीमा तरकारी लगाउन थालेपछि अहिले गाउँ नै तरकारीमय भएको छ,’ उनले भने, ‘स्थानीयवासी बिस्तारै व्यावसायिक तरकारी खेतीमा पनि लागेका छन् ।’
वडाले करेसाबारीमा अनिवार्य रुपमा अर्गानिक तरकारी लगाउनुका साथै प्रत्येक घरमा फलफुलका पाँचवटा बोट लगाउने निर्णय गरेको थियो । त्यो पनि प्रभावकारी भएको वडाको भनाइ छ । स्थानीय रेशमबहादुर भण्डारीले वडाको यस्तो निर्णयले तरकारी खेतीतर्फ आकर्षित गरेको बताए । ‘हामीले ताजा तरकारी खान पाउनुका बेचेर आम्दानी पनि गरिरहेका छौं,’ उनले भने, ‘यसबाट घरखर्चको गर्जो पनि टर्ने गरेको छ ।’
करेसाबारीमा तरकारी नलगाएकै कारण दुई/चारपटक आफ्ना घरमा आएका पाहुना फर्किएका बेलबहादुर घर्तीले बताए । पाहुना नआउँदा खल्लो महसुस भएपछि करेसाबारीमा तरकारी लगाउन थालेको उनको भनाइ छ । ‘अहिले त मैलेमात्र होइन, सबैले तरकारी लगाउन थालेका छन्,’ उनले भने, ‘यसले आम्दानी र सन्तुष्टि दिएको छ ।’ करेसाबारीमा मौसमअनुसार तरकारी लगाउने गरिएको उनले बताए ।
सधैं चाउचाउ र नुनखुर्सानीको धुलोमा बिहानबेलुकी गुजारा गर्दै आएका हातिराम बिकले करेसाबारीमा लगाएको तरकारीबाट राहत भएको बताए । तरकारीको लागि हिजोआज पैसा खर्च गर्न नपरेको उनको भनाइ छ । वडा कार्यालयले गाउँपालिका भित्रका स्थानीयको लागि राम्रो निर्णय गरेको उनले बताए ।
लिउडाँडामा सामूहिक खेती
रुकुम पश्चिम– मुसीकोट नगरपालिका–९, लिउडाँडाका देवीलाल ओली हिजोआज सामूहिक तरकारी खेतीमा संलग्न छन् । उनीसहित पाँचजनाको समूहले मनग्गे आम्दानी गर्नुका साथै सामूहिक कामबाट सफलता पाउन सकिन्छ भन्ने सन्देश पनि दिएका छन् ।
जनचेतना कृषि समूहमा आबद्ध ती किसानले स्थानीय मोहनबहादुर ओलीको ६ रोपनी जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती थालेका हुन् । जग्गाभाडा वार्षिक १० हजार रुपैयाँ तिर्छन् । ‘परम्परागत खेती प्रणालीबाट जीवन निर्वाह गर्न गाह्रो भयो, त्यसैले व्यावसायिक तरकारी खेती थालेका हौं,’ देवीलालले भने, ‘यो खेतीलाई हिउँद लागेपछि अझै खेती बढाउने योजना छ ।’
समूहले पहिलो चरणमा १९ वटा टनेलमा टमाटर, काँक्रा, भिन्डी र तितेकरेला लगाएको छ । टनेल निर्माण, बीउ खरिद र जग्गा व्यवस्थापनमा १ लाख ५० हजार लगानी गरिएको समूहका सदस्य पदमबहादुर खडकाले बताए ।
उनका अनुसार सामूहिक तरकारी खेतीका लागि प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाले १५ टनेल र आवश्यक विषादी सहयोग गरेको छ । खेती विस्तारका क्रममा ९ नम्बर वडा कार्यालयले बाँस खरिद गरिदिएको पदमबहादुरले जानकारी दिए । मोहन ओलीको अध्यक्षतामा रहेको जनचेतना कृषि समूहमा देवीलाल, मोहनबहादुर, पदमबहादुर र भीमबहादुर चन्द सदस्य छन् ।
लिउडाँडाको ७० रोपनी जग्गा भाडामा लिने र समूहमा अन्य सदस्य पनि थप्ने उनीहरूको योजना छ । सदस्यता बढाउँदै लगेर सम्भव भएसम्म सबै गाउँलेलाई सामूहिक तरकारी खेतीमा जोड्ने योजना समूहका अध्यक्ष मोहनले सुनाए । उनले वडा कार्यालय, नगरपालिका तथा अन्य सरोकारवाला निकायलाई त्यसका लागि सहयोग गर्न अनुरोध गरिएको बताए । प्रकाशित : श्रावण २६, २०७६ ०९:३१
एउटै गाउँमा तीनवटा गुफा
श्रावण २६, २०७६ हरि गौतम
रुकुम पूर्व — यहाँको एउटै गाउँमा तीनवटा गुफा फेला परेका छन् । पुथाउत्तरगंगा गाउँपालिका–१२ कोलमा अनौठा गुफा भेटिएको स्थानीयले बताएका छन् । तीनवटै गुफाको नामकरण मगर खाम भाषाबाट गरिएको छ ।
पहिलोको नाम मि कुङ राखिएको छ । खाम भाषामा मि भनेको मान्छे र कुङ भनेको गुफा हो । दोस्रोको सुनरी कुङ राखिएको छ । सुनरी भनेको सुनपानी हो । तेस्रो गुफाको नाम चाँदी राखिएको छ । गुफाभित्रको अवस्था र आकृतिका आधारमा स्थानीयले नामकरण गरेका हुन् ।
पहिलो गुफा सबैभन्दा ठूलो छ । त्यसमा एकैपटक ५० जनाभन्दा बढी मान्छे अँटाउन सक्छन् । त्यसभित्र मान्छेका जस्ता आकृति छन् । पुथाउत्तरगंगा–१२ का वडाध्यक्ष गंगा पुनमगरका अनुसार जमिनबाट २५ मिटरभित्र पसेपछि गुफाको सतह भेटिने उनले बताए ।
उनका अनुसार नजिकै रहको अर्को गुफाभित्र सुनका आकृति छन् । तेस्रो गुफाभित्र चाँदीका जस्ता देखिने थुप्रै आकृति छन् । मान्छेको आकृति भएको ठूलो गुफा एकतर्फ छ भने सुन र चाँदीका आकृति देखिने गुफा अर्कोतर्फ छन् । यी गुफामा गाउँबाट १५ मिनेटको पैदल यात्रापछि पुगिन्छ ।
गुफाभित्र कतै हात्तीको सुँडजस्ता, कुनै ठाउँमा गाईका थुनजस्ता आकृति छन् । गुफाभित्र कुनै वस्तु राखियो भने केही वर्षभित्रै ती वस्तुलाई चट्टानले छोपिदिने विशेषता छ । केही वर्षअघि गुफामा स्थानीयले काठ राखेका थिए । हाल ती काठ चट्टानजस्तै भएका छन् । स्थानीयले पहिलेदेखि देखेको भए पनि स्थानीय युवाले महत्त्व दिएपछि केही समयदेखि मात्रै गुफाप्रति चासो बढ्न थालेको हो ।
गाउँभन्दा तल गुफा भेटिए पनि यी गुफासम्म पुग्न गाउँभन्दा माथिबाटै सुरुङमार्ग रहेको स्थानीयले बताए । धेरै वर्षअघि गुफाभन्दा दुई किलोमिटरमाथि रहेका अन्य गुफाबाट छिरेका कुकुर केही समयपछि नयाँ फेला परेका गुफाबाट निस्केको किम्वदन्ती रहेको स्थानीय मन्जित पुनले बताए ।
गाउँभन्दा माथि मगर खाम भाषामा निम कुङ भनिने अर्को गुफा छ । मगर खाम भाषामा निम भनेको भालु हो । भालु लुक्ने गुफा भएकाले यसलाई स्थानीयले निमकुङ नामकरण गरेका हुन् । यो गुफामा पनि जमिन सतहबाट उज्यालोको सहायताले २५ मिटरजति भित्र जान सकिन्छ ।
गुफा पत्ता लागेदेखि नै गुफा हेर्न जानेहरूको संख्या बढदै गएको छ । स्थानीयले यसको प्रवर्द्धनका लागि वडा, गाउँपालिका तथा प्रदेश सरकारसँग माग गरेका छन् ।
प्रदेशसभा सदस्य तेजबहादुर ओलीले हालसम्म भेटिएका गुफामध्ये यी तीन गुफा फरक विशेषताका भएको बताए । ‘प्रदेश सरकारबाट बजेट व्यवस्था गरेर यसलाई रुकुम पूर्वको पर्यटकीय गन्तव्य बनाउने गरी काम सुरु गर्ने छौं,’ उनले भने, ‘गाउँदेखि गुफासम्म र गुफा प्रवेशस्थलमा सिंढीको व्यवस्था गर्न प्रदेश सरकारका तर्फबाट पहल गर्ने छौं ।’